Ọdụ Ragbọ njem Cyprus na Map | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAsia90 TRNCAkụkọ banyere ilgbọ okporo ígwè Saịprọs na Map
16 / 05 / 2020 90 TRNC, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General
akụkọ ihe mere eme nke cibris
Ọ bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ okporo ụzọ na-arụ ọrụ n'okpuru aha Governmentlọ Ọrụ Gọọmentị Saịprọs na Saịprọs n'etiti 1905-1951. Ọ rụrụ ọrụ n'ahịrị n'etiti obodo Evrihu nke Lefke na obodo Famagusta. N'ime afọ niile ọ na-arụ ọrụ, o buuru ihe dị ka tọn 3.199.934, ibu na ndị njem 7.348.643.
Owuwu ya bidoro n’afọ 1904, mgbe emeghekwara akụkụ Nicosia-Famagusta, akụkụ mbụ nke ahịrị ahụ, Onye Ọchịchị Kọmitii Britain, Sir Charles Anthony King-Harman, mere ụgbọ elu mbụ ya site na Nicosia rue Nicosia na 21 Ọktoba 1905. N’otu afọ ahụ, ọrụ nke eriri Nicosia-Omorfo malitere wee mezue ngalaba a n’ime afọ abụọ. N’ikpeazụ, ọrụ nke eriri ahụ Omorfo-Evrihu malitere na 1913, ma ahọpụtara ahịrị n’afọ 1915 wee bido ngalaba a.
Ebumnuche e ji ewu ụlọ bụ ibu nke inine, mkpụrụ osisi a na-emepụta gburugburu obodo Omorfo (Güzelyurt) na ọla ndị a na-esi n'obodo Lefke wee ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri Larnaca. Maka ebumnuche a, e bu ụzọ lebara akara Omorfo-Larnaca anya. Ma mgbe emesịrị, agafere okporo ụzọ ikpeazụ ahụ site na Larnaca gaa Famagusta, mgbe ụfọdụ ndị ama ama na Larnaca kwuru na okporo ụzọ ụgbọ oloko ga-emebi azụmahịa na kamel na ndị bịara abịa ga-ata ahụhụ site na ya.
Ego ego ụgbọ elu nke £ 127,468 (Pound) site na mbinye ego n'okpuru Iwu Mgbazinye ego nke 1899, ma ahịrị ụlọ ọrụ na-ebubata ya.
Ozi Linezọ Railway
Ogologo ahịrị nke ahịrị ahụ bụ 76mil (122 km), ogologo ụgbọ okporo ígwè bụ 2 ụkwụ 6 inch (76,2 cm). E nwere ndị na-aga ije na ọdụ ọdụ anọ. Uda ahịrị ahịrị a dị 100 n’etiti Famagusta Nicosia na 1 n’ime 60 n’etiti Nicosia Omorfo.
Enwere ụlọ ọrụ iri atọ n'okirikiri ahụ, ọkachasị Evrihu, Omorfo (Güzelyurt), Nicosia na Famagusta. E dere aha ọdụ ụgbọ ala n'asụsụ Turkish (Ottoman Turkish), Greek and English. E jikwa ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a dị ka ụlọ ọrụ post na telegram. Traingbọ ahụ were ọsọ n'etiti Nicosia na Famagusta n'ihe dị ka awa 30, na-agba ọsọ 30 mph (ihe dị ka 48 km / h). Oge njem nke ahịrị niile bụ awa anọ.
Ọnọdụ na Ọnọdụ
Kaimakli - (Nri)
Ihe omuma a diri akara ahu na 1912 ma ebe obula ahuru si Omorfo rue EVRYCHOU mepere, emesia, uzo uzo uzo ahu di adi na udiri a.
Imechi uzo ugbo elu na oge ikpeazu
Mkpebi gọọmentị Britain mere mkpebi ahụ iji kwụsị ụzọ ụgbọ ala n'ihi nkwalite njem ụgbọ ala, belata ọchịchọ maka ụzọ ụgbọ oloko na akụ na ụba. Site na mkpebi ae mere na 1951, Saịprọs ụgbọ okporo ígwè dị afọ 48 kwụsịrị. Flightgbọ elu ikpeazụ ya kwụsịrị na Ọdụ ụgbọ mmiri na Famagusta na Disemba 31, 1951 na 14:57 site na njem site na Nicosia gaa Famagusta.
Ihe dị ka ndị ọrụ 200 na ndị ọrụ bekee nke ụlọ ọrụ ahụ were zigara ndị ọrụ gọọmentị na-ahụ maka ọkara.
Railway Line Taa
Mgbe ụzọ ụgbọ oloko kwụsịrị, gọọmentị ndị Britain na-achị achị rere ọrịrị niile na ọdụ ụgbọ ala wee resị ya ụlọ ọrụ akpọrọ Meyer Newman & Co na £ 65.626. Maka nke a, ọ dịghị akụkụ na-ahapụ ụzọ egwu nke ahịrị.
Buildingslọ ndị Güzelyurt, Nicosia na Famagusta dị n'etiti ókèala Northern Cyprus ka guzoro na ọrụ maka mpaghara dị iche iche. N'aka nke ọzọ, Stationlọ ọrụ EVRYCHOU dị na steeti ya n'okpuru Saịprọs ma ọ na-arụkwa ọrụ maka ebumnuche ndị ọzọ. Dika uzo abuo n'ime ulo oru iri na abuo nke ulo oru ji eme ihe; Uko a no di no 12 a di n'obara nke Famagusta Land Registry Office na ebe ogba abali abuo a di na Güzelyurt Festival Park.
EVRYCHOU Station, nke nwekwara ogbunigwe ọla kọpa, ka dị taa.
Njem ụgbọ ala nke Saịprọs
Akụkọ ụgbọ oloko a na-amaghị ama nke Cyprus
Nzaghachi na-akatọ ụgbọ okporo ígwè dị elu site na Cyprus
E nwekwara ọrụ ụgbọ mmiri na Saịprọs
Ndị ọkwọ ụgbọala na-azụ ndị Metro Istanbul na-enweta akwụkwọ
Ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ Metro Istanbul natara ọkwa ha
Ationgbọ njem Kayseri Setịpụụrụ Ihe Nlereanya nke Saịprọs
Maapụ Ankaray Map na Map Ankaray
Mpaghara TCDD Mpaghara 3 Cumaovası - Torbalı - Selçuk Railway Project Superstructure…
Ilzọ Ọchịchị Saịprọs Saịprọs
Companylọ ọrụ ụgbọ oloko nke gọọmentị Cyprus
Nicosia-Omorfo okporo ụzọ
Usoro okporo ígwè nke Omorfo-Evrihu
TCDD Menemen Manisa Double Line Railway Project Maka ihe owuwu ihe owuwu…
TCDD 2. Mpaghara Polatlı Organisation Mpaghara Mpaghara Single Line Railway Project Survey, oru ngo,…
Mpaghara TCDD 1st Çorlu - Martaş Port New Railway Line na Captain Demir…
TCDD Bozkurt - Dinar Railway Line Project Road rụzigharị ọrụ dị nro ụbọchị iş